ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : ဟာသ sign language (You must watch it!!!!)
နိုင်ငံကြီးတွေက ကျောင်းတွေမှာ ဆွံ့ အ နားမကြားသူ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူတွေ သာမန်အတန်းလာတက်ရင် ဆရာ၊ဆရာမ ရှင်းပြတာကို တခြားလူတွေ နားလည်တဲ့ အတိုင်း နားလည်ဖို့sign language နဲ့ သရုပ်ပြငှားထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယို လေးကတော့ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ ကျမကို ခေါင်းရှင်းပေးလို့မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Please don't take serious about the lyrics , it isabit rude for Burmese ears but nice though.... and don't forget to smile after it......
သရုပ်ပြတော်တော် တော်ပါတယ်။ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါ။
Posted by ရိုးရိုး at Tuesday, January 11, 2011
ညယံ 11 January 2011 at 03:30
ဟ ဟ ... သီချင်းက ဆိုးပေမယ့် သရုပ်ပြကို ကြည့်ပြီး ရီသွားမိတယ် .. :)
ရိုးရိုး 11 January 2011 at 03:41
Thank you ပါ ညယံ ရေ
JUSTICE999BURMA 11 January 2011 at 16:15
ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ၏... Deaf & Dumb ကတွဲနေရှာတော့ ဒီလိုပဲ သရုတ်ပြမှကိုက်လေတော့တယ်ကွယ်... လူကောင်းအတွက်လဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကြည့်နိုင်တာ တင်ပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်...
ရိုးရိုး 14 January 2011 at 01:30
ဒီဗွီဒီယို ပိုင်ရှင် သရုပ်ဆောင်မိန်းကလေးက sign language ကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်ကတဲ့ ။